Chii chinonzi Google Trends, nei ichikosha uye inoshanda sei | ECommerce nhau
Chii chinonzi Google Trends
Encarni Arcoya | | Zvidzidzo uye zviwanikwa
Chimwe chezvishandiso chinonyanya kushandiswa nenyanzvi dzeSEO pasina mubvunzo Google Maitiro. Icho chishandiso chemahara chaunogona kuziva kuti "chakakosha" sei mukutsvaga izwi (kana seti yemazwi), zvichidaro kubatsira kuona kuti ndepapi angave mazwi akakosha anoshanda zvakanyanya muinternet kushambadzira nzira (uye yekumisikidza) .
Asi, Chii chinonzi Google Trends? Chii ichochi? uye inoshanda sei? Nhasi tinotsanangura zvese zvaunoda kuti uzive nezve iri Google basa raungave iwe usinga zive mushe.
1 Chii chinonzi Google Trends
2 Chii chinonzi Google Trends chakagadzirwa?
3 Nei uchishandisa chishandiso ichi kune yako eCommerce
4 Mashandisiro aungaita Google Trends
Kekutanga nguva yataive tichiziva kuti Google Trends yaivepo yaive muna 2006, kambani payakaburitsa chishandiso kuitira kuti vatevedze shanduko yekutsvaga kwakatsvaga mazwi akakosha. Mune mamwe mazwi, chishandiso chinokutendera kuti uongorore kiyi yakakosha nenzira yekuti iwe uzive kuti ndeupi rudzi rwekutsvagisa kwainako kwemakore, mwedzi, vhiki kana mazuva.
Google Trends inogona kufungidzirwa se chishandiso chinoongorora kufarirwa kwemazwi kana mazwi kuti uzive kana ari muchimiro kana, zvinopesana, ari kudzikira. Uye zvakare, inopawo imwe dhata senge huwandu hwevanhu, tsvagurudzo dzinoenderana, misoro inoenderana, nezvimwe.
Iyi ficha yeGoogle ndeye mahara zvachose uye haidi kunyoreswa kwepamberi kana kubatanidzwa kune email. Nyanzvi zhinji dzeSEO kana nyanzvi dzekushambadzira dhijitari dzinoishandisa pabasa ravo nemhedzisiro yakanaka kwazvo, kunyangwe isu tisingakwanise kukuudza kuti icho chinhu chakasarudzika, ivo vanozvisanganisa nemamwe maturusi (zvakare emahara kana akabhadharwa).
Chii chinonzi Google Trends chakagadzirwa?
Pakutanga, paunouya kune iyo peji uye woisa izwi kudzora, iyo data iyo chishandiso chinokanda kwauri inogona kukuremedza iwe, asi zviri nyore kwazvo kunzwisisa. Uye hazvisi zvekungokuratidza iwe maitiro eshoko iro rawakaisa, asi zvimwe zvakawanda. Chaicho:
Vhoriyamu yekutsvaga. Ndokunge, iro izwi rinozvibata zvinoenderana nemamwe mazuva, vhiki, mwedzi, kana kunyangwe makore.
Kutsvaga maitiro. Izvi zvinokuudza kana izwi rawakaisa riri kuwedzera kana riri kudzikisa traffic yaro. Chii ichi? Zvakanaka, kuona kana riri izwi rinogona kushanda izvozvi kana munguva pfupi (semuenzaniso, Zuva reValentine. Rinogona kunge riri kuwedzera pakati paNdira asi, mushure maFebruary 20, zvirokwazvo richadzikira kusvika ranyangarika kwegore rinotevera. ).
Forecast. Ichi chikamu cheGoogle Trends hachinyatso kuzivikanwa, asi zvinokubatsira iwe kuziva kana iro kiyi izwi ringave riri kufamba kumusoro (kana pasi) pane imwe nguva.
Kutsvaga kwakabatana. Kureva, mazwi anotsvagwawo zvine chekuita nezwi rawakaisa.
Sefa kusecha. Chishandiso chinokutendera iwe kutsvaga nenzvimbo yenzvimbo, chikamu, zuva ...
Nei uchishandisa chishandiso ichi kune yako eCommerce
Kana iwe uine online chitoro, kunyangwe kana iwe usina nzira yekutengesa, Google Trends yakakosha kune rako zuva nezuva. Uye, kunyangwe iwe ungasatenda izvi, zvinokubatsira iwe kuziva kuti ndeapi matsva maitiro, ndeapi vashandisi ari kutsvaga zvakanyanya, nezvimwe. Mune mamwe mazwi, inogona batsira iwe kuona kuti ndezvipi zvigadzirwa zvichave zvinobudirira muCommerce yako.
Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe une chitoro cheshangu uye zvinobva zvaitika kuti muGoogle Maitiro shangu dzeimwe mhando dziri kusimuka kunge furo. Uye iwe unazvo zvekutengesa uye nemitengo yakachipa pane vako vakwikwidzi. Zvakanaka, kutora mukana wekudhonza nekudyara mari shoma mukusimudzira icho chaicho chigadzirwa chinogona kuita kuti kushanya kwako uye kutengesa kukwire nekuti urikupa chimwe chinhu chiri kutsvakwa nevanhu.
Izvo zvinokubatsira iwe gadzira yako mafaera echigadzirwa. Uye ndezvekuti neakakosha mazwi akakosha iwe unozokwanisa kujekesa zvinyorwa zvechigadzirwa chimwe nechimwe kuitira kuti vanokambaira veGoogle vakugadzikise zvirinani (vazhinji havasati vaziva kuti kuisa zvinyorwa zvepakutanga uye zvakasarudzika pamakadhi zviri nani pane kudzokorora zvakafanana vamwe vese).
Mashandisiro aungaita Google Trends
Uye ikozvino tinoenda kune zvinoshanda, kuti tizive mashandisiro anoita chishandiso. Kuti uite izvi, danho rekutanga kuenda kuGoogle Trends chishandiso. Nokusingaperi, kumusoro kwekurudyi, inofanira kuisa Spain senyika (kana iwe uri kuSpain) asi iwe unogona kunyatso shandura nyika kune kwauri.
Pane iyo huru skrini iwe uchaona Mimwe mienzaniso inoratidzwa sei asi chenjera, haisi data kubva kuSpain, asi kubva kuUnited States kana pasirese, kwavanogona kusakubatsira nako.
Kana iwe ukaenda pasi zvishoma, iwe unozoziva izvo zviri kuitika nyika zvazvino mamiriro uye, pazasi, kutsvaga kwegore (unogona kuwana mazwi eSpain pano).
Iwe unenge waona kuti kune zvakare bhokisi rekutsvaga. Ndipo paunofanirwa kuisa izwi rekutsvaga kana musoro wenyaya. Semuenzaniso, eCommerce. Rova girazi rinokudza (kana Pinda) uye zvinokutora iwe kune peji rezvabuda.
Peji remhedzisiro rinokuratidza zvinhu zvakawanda. Asi chatinoona chakakosha ndechekuti:
Nyika. Ichaisa Spain, asi pano iwe unogona zvakare kuchinjira iyo nyika inofarira iwe.
Mwedzi gumi nemaviri apfuura. Nokutadza iyi nguva inogara ichibuda, mukutanga kutsvaga, asi unogona kuichinja pane akati wandei sarudzo: kubva muna 2004 kusvika nhasi, mumakore mashanu apfuura, mazuva makumi mapfumbamwe apfuura, mazuva makumi matatu apfuura, mazuva manomwe ekupedzisira, zuva rekupedzisira, rekupedzisira Maawa mana, miniti yekupedzisira.
Mapoka ese. Iyo inokutendera iwe, kunyanya kune mazwi kana mazwi anogona kunge aine akati wandei mazano, kuti uone chaiko kutsvaga.
Kutsvaga kwewebhu. Nokutadza iwe unenge uine izvi, asi iwe unogona zvakare kutsvaga nemufananidzo, nhau, Google Shopping (yakakwana yeCommerce) kana YouTube.
Pazasi chete, unenge uine girafu iro rinozoshanduka paunoshandura iyo yapfuura data.
Sezvauri kuona, kiyi kiyi yako inowanikwa kumusoro, asi kana ukatarisa padyo, pane chinyorwa chinoti "enzanisa". Izvi zvinoshanda kuisa rimwe izwi rakakosha ipapo rinokufadza uye kuziva kuti ndechipi pane izvi chakasimba, kana chine tsvakiridzo zhinji.
Ipapo zvinobva zvaonekwa kwauri kufarira kune izwi iri munyika, nenzira yekuti ivo vakuudze kuti ndedzipi nharaunda dzakazvimirira ndidzo dzinotsvaga izwi iri zvakanyanya (izvi zvakakosha kuziva, kunharaunda yako kana guta, chii chinonyanya kufadza, kunyanya kana eCommerce yako iri yemuno).
Chekupedzisira, iwe une makoramu maviri. Imwe ndeye iyo nyaya dzakabatana, ndiko kuti, mazwi kana mazwi anogona kunge achienderana neshoko rawatsvaga; kune rimwe divi, une mibvunzo yakabatana, ndiko kuti, mamwe mazwi akakosha anoenderana neyawatsvaga uye angave ari nani sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Zvidzidzo uye zviwanikwa » Chii chinonzi Google Trends
Maitiro ekutumira pasuru
Ecommerce webhusaiti chengetedzo